छोरा Archives - Nepal Times Online
पापि छोरो आफ्नै आमा नाता पर्नेलाई बेहुली ब’नाएर गाउँमै ल्याए (भिडियो हे’र्नुहोस)
गुल्मीको मुसिकोटमा एक युवकले आफ्नो आमा नाता पर्ने महिलालाई श्रीमती ब’नाएका छन् । आफन्ती र न’जिकको साइनोले आमा भन्नुपर्ने महिलालाई भगाएपछि ति महिलाका श्रीमान मिडियामा आ’एका थिए । नातामा आमा छोरा नाता पर्नेहरुले वि’वाह गरेर गाउँमै फर्किएका छन् । उनीहरुकोउमेरको पनि धेरै फरक छ । चार महिना देखि आफुहरु नजिकिएको यु’वकले बताएका छन् । युवकको […]
छोरा भन्दा कम छैनन् जिम्मेवारी र कर्तव्यमा छोरीहरु ।
काठमाण्डौ ३० माघ हरि बास्तोला छोरा हुँदैमा सवै थोक हुन्छ भन्ने हाम्रो समाजको रितिथिती र परम्परालाई यहाँका दुई छोरीहरुले चुनौती दिएका छन् । छोरा नभएपनि आमाप्रति जिवित हुँदा र मृत्यु भएपछि छोराले गर्नुपर्ने सवै व्यवहार देखाएर उनीहरु समाजका लागि पनि अनुकरणीय बनेका हुन् । पोखरा महानगरापलिका वडा नं. १७ पाण्डवटोलस्थित स्वर्गीय आमा तिल कुमारी ढकालकोे […]
Posted on January 12, 2021 January 12, 2021 Author USER-1	Comment(0)
गर्जिए कमल थापा राजतन्त्रको लागि मर्न र मार्न तयार छौ, गणतन्त्रमा लुट मच्याउनेहरुलाई ठिक पार्छौ ।
Posted on January 1, 2021 January 1, 2021 Author USER-1
नागरिकले अपनत्व महशुस गर्ने गरि प्रहरी सेवा प्रवाह गर्नु : प्र.म.नि. शैलेश थापा क्षेत्री
Posted on December 6, 2020 December 6, 2020 Author USER-1
लक्षणको आधारमा मुटुरोगको जोखिम पत्ता लगाउने तरिकाहरु ।
अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण विशेष अनुशिक्षण तालिम उद्‌घाटन कास्की ।
Posted on January 18, 2021 January 18, 2021 Author USER-1
जे लेखेको छ तै हुन्छ । म पनि अब बिहे गर्छु -कल्पना
कामको सम्मान तथा पुरस्कार बितरण कार्यक्रम सम्पन्न